monopole Manufacturers - China monopole Factory, Suppliers
Inqaba yonxibelelwano luhlobo lwenqaba yokuhambisa umqondiso, eyaziwa ngokuba yinqaba yothumelo lomqondiso okanye inqaba yomqondiso.Umsebenzi wayo oyintloko kukuxhasa ukuhanjiswa komqondiso kunye ne-antenna yokuhambisa umqondiso.Injongo: Mobile / China Unicom / inkqubo yothutho satellite positioning (GPS) kunye namanye amasebe onxibelelwano.
Ipali yombhobho enye yenye yeendlela eziqhelekileyo zonxibelelwano lwenqaba.Ithandwa kakhulu ngenxa yendawo encinci yomgangatho kunye nobunzima obulula.
I-tube tower enye, luhlobo oluqhelekileyo olusetyenziswayo, olunenkangeleko entle, egubungela indawo encinci ye-9 ukuya kwi-18 yemitha yesikweri, iyabiza, kwaye yamkelwa ngobuninzi bolwakhiwo.Umzimba weTower wamkela icandelo elisengqiqweni ngakumbi, elidityaniswe ngamandla aphezulu e-bolt.ineempawu zofakelo olulula kwaye inokulungelana noluhlu lwendawo entsonkothileyo efayiliweyo.
Unxibelelwano olulodwa lweTube Steel Monopole Wifi Antenna Tower
I-Monopole Tubular Tower Pole luhlobo lwenqaba yentsimbi eluncedo kwaye inoveli.Isetyenziswa ngokubanzi ngamacandelo okwakha ngenxa yendawo enhle, indawo encinci yomgangatho, ukusebenza kweendleko eziphezulu kunye nokuqina.Isetyenziswa ikakhulu kwi-microwave, i-ultra short wave, i-wireless network signal transmission and transmission.
Intsimbi ye-Galvanized WiFi Tower Pole Tower
Iinqaba ze-Wi-Fi ziinqaba ezikhupha indlela ethe ngqo yomqondiso ukuya kuthi ga kwiikhilomitha ezingama-60 kwaye zinxibelelane kuphela nezinye iinqaba ze-Wi-Fi xa zinombono ongenakuthintelwa phakathi kwazo.Fumana iinkcukacha zeenkampani ezibonelela nge-Wifi Tower, i-Manufacturing & wholesaling wifi towers e-China..Fumana i-Wifi Tower ngexabiso elifanelekileyo kwiFactory ngqo, Qhagamshelana ngoku !!!
imonopole tower, luhlobo oluqhelekileyo olusetyenziswayo lwenqaba yonxibelelwano, enenkangeleko entle, egubungela indawo encinci ye-9 ukuya kwi-18 yemitha yesikweri, ingabizi kakhulu, kwaye yamkelwa ngobuninzi bolwakhiwo.Umzimba weTower wamkela icandelo elisengqiqweni ngakumbi, elidityaniswe ngamandla aphezulu e-bolt.ineempawu zofakelo olulula kwaye inokulungelana noluhlu lwendawo entsonkothileyo efayiliweyo.
Inqaba enye yetyhubhu ikwabizwa ngokuba yi-monopole tower, luhlobo oluqhelekileyo olusetyenziswayo, olunenkangeleko entle, egubungela indawo encinci ye-9 ukuya kwi-18 yemitha yesikwere, enexabiso elisebenzayo, kwaye yamkelwa ngobuninzi bolwakhiwo.Umzimba weTower wamkela icandelo elisengqiqweni ngakumbi, elidityaniswe ngamandla aphezulu e-bolt.ineempawu zofakelo olulula kwaye inokulungelana noluhlu lwendawo entsonkothileyo efayiliweyo.
I-12m eshushu i-DIP eGalvanized Mobile Light Monopole Tower